ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ဟာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘဲဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မဟုတ်၊ Martech Zone
အဆောက်အ ဦး များတည်ဆောက်ခြင်းမှ software တည်ဆောက်ခြင်းအထိ။
1950 ရဲ့၌တည်၏ ရေတံခွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံ ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စနစ်သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းမစတင်မီမှန်ကန်သောအဖြေကိုလိုအပ်သည်။ ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာကြီးမှာမှန်ကန်သောအဖြေသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သင်ကအဆောက်အ ဦး မှတဆင့်တစ်ဝက်ကွဲပြားခြားနားမိုးမျှော်တိုက်တည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုစိတ်ကူးနိုင်ပါသလော
သူကပြောသည်မှာ software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ဤဖြစ်စဉ်၏အသုံးပြုမှုမှထွက်ပေါ်လာသောရလဒ်သည် software (feature + ux) ၏ဒီဇိုင်းကိုဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ မှန်သော ရှေ့။ ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပြproblemနာတစ်ခုအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များစာရွက်စာတမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များစာရွက်စာတမ်းတို့ဖြင့်သူတို့၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေလိုသည့်စကားကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့၏အကြံအစည်များကိုတည်ဆောက်ကာကုန်ချောထုတ်ကုန်များကိုစျေးကွက်သို့ပြန်လည်အပ်နှံသည်။ ဒီ model အလုပ်လုပ်တယ် အဲဒါကမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
Eye Rolling အဖြစ်စတင်သောအရာသည်မျက်လုံးဖွင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် - အကယ်၍ သင်ခွင့်ပြုလျှင်
၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်အင်တာနက်သည်အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေသောစီးပွားဖြစ်အရံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အင်တာနက်ကုမ္ပဏီသစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးချရန်အလားအလာရှိသောနည်းလမ်းများကိုစတင်ခဲ့သည်။ Developer သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကို Marketing master သို့လွှဲအပ်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ သူတို့သည်နောက်ဆုံးကုဒ်ကိုအင်တာနက်သို့တိုက်ရိုက်ဖြည့်နိုင်ပြီးဖောက်သည်ထံသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖောက်သည်များဆီသို့ဖြန့်ကျက်ခြင်းဖြင့် developer များနှင့်ဒီဇိုင်နာများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အမျှအရေအတွက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုချက်ချင်းရယူနိုင်ကြသည်။ စျေးကွက်မှအရည်အသွေးပြည့်မှီသောတုန့်ပြန်ချက်မဟုတ်သော်လည်းအမှန်တကယ်ဖောက်သည်များ၏အပြန်အလှန်အချက်အလက်။ ဘယ်အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်သောရသော! သတင်းကောင်းအားလုံးမှန်ပါသလား။ နံပါတ်
လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကအောင်မြင်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြသခဲ့သောရေတံခွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံနှင့်၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသည်လုပ်ငန်းရပ်တန့်သွားသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီတုံ့ပြန်ချက်ကိုမရရှိခဲ့ပါ။ အမြန်ကြားမှာအယူအဆမရှိဘူး။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် developer များနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် Utah တောင်တန်းများရှိအပန်းဖြေစခန်း ဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုများကိုမည်သို့စွမ်းဆောင်နိုင်မည်၊ ပိုမိုအားကောင်းသည့်အသင်းများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်များဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ကြောင်းအစည်းအဝေးမှာ ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု လှုပ်ရှားမှုကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး၎င်းကိုဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်းတွင်ထင်ရှားသောစနစ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာအသင်းနှင့်သူတို့၏နောက်ကျကျန်ရှိနေမှုများနှင့်သူတို့၏လက်ရှိ Sprint များအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည့်နောက်ဆုံးသောကာလကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဤစနစ်ကိုမည်မျှလျင်မြန်စွာနှင့်အပြည့်အ ၀ ကျင့်သုံးသည်ကိုနက်နက်နဲနဲသုံးသပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာညီအစ်ကိုများသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်အတွင်းအပြောင်းအလဲအများဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သောအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေစဉ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ထိခိုက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ အသစ်တွေ့ရှိသောအင်ဂျင်နီယာမှကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးကျေးဇူးမှာဤသို့ပြောရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ပို့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၀၀ ကျော်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စနစ်များကိုဆင်ကန်းတောင့်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ရေတံခွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံနှင့်အလွန်ပင်ဆင်တူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်၎င်းနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာသည် မှန်သော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးပုံစံ၊ အညွှန်း၊ လိုဂိုလိုမျိုးအဖြေပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အလုပ်ကနေထွက်မလာခင်အထိကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုသူရဲ့ ဦး ဆောင်လမ်းပြအဖြစ်ထည့်သွင်းဖို့သွားခဲ့တယ်။ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ပြောင်းလဲပစ်မလဲ ဤသည်ကြိုးစားခဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ငါတို့ဆီမှာ Dorsey နဲ့ Zuckerberg တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်များကိုလူကြိုက်များခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၊ တံဆိပ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များကိုတုန့်ပြန်ရန်အလားအလာသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူစေသည်။ ဟုတ်တယ်နော် သို့သော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းကိုဟန့်တားထားသည်။ ငါတို့ဟာခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်လူမှုရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုဆွေးနွေးရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုကွဲပြားစွာအလုပ်လုပ်ရန်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာနှင့်စျေးကွက်အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုများသည်သက်ဆိုင်ပြီး Agile Development Manifesto သည်စျေးကွက်အတွက်စံနမူနာဖြစ်သင့်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်း။
ဒီအစည်းအဝေးမှာအမည်ရှိ သုည Sprint ဤစျေးကွက်များကရေးဆွဲခဲ့သည် ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်အတွင်း Agile Marketing ဟူသောအယူအဆစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
Agile သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏နေ့စဉ်လက်တွေ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စနစ်တကျနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လက်တွေ့မကျသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်စမ်းသပ်မှုအသစ်များကိုလေ့လာရန်အတွက်အချို့သော“ လက်တွေ့မကျသောအချိန်” ကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ချိန်သီးသည်အစဉ်အမြဲတီထွင်ဆန်းသစ်မှု (အတွေးအခေါ်အသစ်များပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်အသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုကြိုးစားခြင်း) နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့အတွက်ဘာလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုတွက်ချက်ခြင်း) နှင့်သွက်လက်သောဖြစ်ခြင်းသည်သင့်အားနှစ် ဦး စလုံး၏ ဦး စားပေးမှုအတွက်ဖြေရှင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ရဲ့ရိုးသားကြပါစို့ ၎င်းသည်အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြောင့်ဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်၎င်းတို့တွင်စမ်းသပ်ရန်အချိန်သို့မဟုတ်ငွေမရှိဟုခံစားကြရသည်။ သို့သော်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်မပါဘဲ၊ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်နောက်ဆုံးတွင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအရှုံးပေးလိုက်ရသည်။ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းအသစ်များကို အခြေခံ၍ စမ်းသပ်ခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွင်သင်ယူရန်၊ ကြီးထွားရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်အတွက်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်များလွန်းသည်ဟုပြောခြင်းနှင့်တူ၏။
အဖြေမှာသေးငယ်ပြီးတိုင်းတာ။ ရှာဖွေတူးဖော်သည့်အဆင့်များစွာပါ ၀ င်သောသွက်လက်သောအလေ့အကျင့်များကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့လက်ကိုင်ပုဝါသည်လူမဆန့်ကျင်ရေးချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်။
Agile သည်တည်ငြိမ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအတွင်းစိတ်မချရသောထိရောက်မှုနှင့်အတူဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုပေးသောမသိသောအကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ အသစ်သောအရာများကြိုးစား။ သင်၏နံပါတ်များကိုပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အဓိကအတားအဆီးတစ်ခုမှာသမားရိုးကျကုမ္ပဏီအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလုပ်အခန်းကဏ္ definition ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ နိုင်ငံရေးနှင့်စွန့်စားရမှုများကိုမနှစ်သက်ခြင်းတို့ဖြင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သော ၀ န်ထမ်းများစွာကိုဖယ်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Kotter ကစာရင်းပြုစုထားသည် ရှစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင် ရိုးရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွင်းအတွင်းမှရှာဖွေရေးယဉ်ကျေးမှုကိုစတင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားသွက်လက်သောအလေ့အကျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့တူညီတဲ့ဒြပ်စင်များမှာ, ငါယုံကြည်တယ်။
အရေးတကြီးအရေးပါသည် - စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း (သို့) ခြိမ်းခြောက်မှုသည်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်အလုံအလောက်ရှိရမည် ဆင်ကိုသတိရပါ သူကစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြေးပါတယ်။ သူဝင်နိုင်တဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုရှာပါ။
ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ထူထောင်ပါ - ခေတ်မီသွက်လက်သောကွန်ယက်အသစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုသူများအတွက်သူတို့သည်ဌာနအမျိုးမျိုးမှလာပြီးအဆင့်ဆင့်တွင်တာ ၀ န်နှင့်အခွင့်အာဏာရှိရမည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ ၀ င်များသည်သွက်လက်သောကွန်ယက်တွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်လူများစုလိုသောအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အုပ်စုဖွဲ့ရန်မလိုပါ။
အစပြုမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အဖြေများကိုရှာဖွေရန်မေးခွန်းများ၊ - စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုလေ့လာရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အတွေးအခေါ်ကိုတီထွင်ပါ။ သူတို့မှားရင်တောင်သူတို့သိချင်တဲ့သဘာဝဆန္ဒကိုလှုံ့ဆော်ပေးသင့်တယ်။ အဆိုပါရူပါရုံကိုအကျိုးစီးပွားနှင့်သိချင်စိတ် pique သငျ့သညျ။
အခြားခေတ်မှီသွက်လက်သောအုပ်စုနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးမှ ၀ ယ်ယူရန်မျှော်မှန်းချက်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ - သင်၏ယူဆချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါ။ ၎င်းတို့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မလိုပါ၊ သို့သော်သူတို့စိတ်ဝင်စားဖို့လိုသည်။ ဘာကြောင့်မင်းကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုအတွေးအခေါ်ပေးပါ။ ၎င်းကိုရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသောဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သောစာရေးဆရာကောင်းတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ရန်။
ကျယ်ပြန့် -based အရေးယူလုပ်ပိုင်ခွင့်။ - အဆင့်ဆင့်၏အာဏာသည်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအားလုံးသည်ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်သွားသည်။ ခေတ်ရဲ့သွက်လက်သောကွန်ယက်တွင်အကြံဥာဏ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများသည်မည်သူမဆိုထံမှလာနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ရှိသော်လည်းအရာဝတ္ထုမှာအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကလှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားနေသည့်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သေးငယ်။ မြင်နိုင်သော၊ ရေတိုအနိုင်ရလဒ်များကိုကျင်းပပါ။ - သင်တန်ဖိုးကိုမျှမျှတတလျင်မြန်စွာမပြနိုင်လျှင်သင်၏သွက်လက်သောကွန်ယက်သည်ကြာရှည်မခံပါ။ အဆင့်မြင့်သံသယများကသင်၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချေဖျက်နိုင်လိမ့်မည်။ သေးငယ်တဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်ပါ တစ် ဦး ရရှိသောပဏာမခြေလှမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ကောင်းကောင်းလုပ်ပါ ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ဒါကအရှိန်အဟုန်ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မယ်။
စိတ်မပျက်ပါနဲ့ - သင်ကအောင်ခြင်းတစ်ခုလိုသည့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အောင်ပွဲများစွာအကြောင်းကိုမကြေညာပါနှင့်။ ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နည်းလမ်းကအမှားတွေကနေသင်ယူခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ပါ။ ဆက်ပြီးရှေ့ကိုဆက်သွားပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဓာတ်ငွေ့ကိုခြေဖဝါးချလိုက်တဲ့အခါယဉ်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးဆန့်ကျင်မှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ သင်၏ကွန်ယက်အစပျိုးမှုအတွက်အချိန်ယူပါ။ မည်မျှပင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အလုပ်များပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ၊
အပြောင်းအလဲများနှင့်သင်ခန်းစာများကိုစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးတွင်ထည့်သွင်းပါ။ - ဒါခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ကွန်ရက်ကအဆင့်ဆင့်ကိုအကြောင်းကြားပေးနိုင်တယ်။ သင်တစ်ခုခုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အသစ်သောအခွင့်အလမ်းအသစ်တစ်ခုကိုလုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေသောအခါ၎င်းတို့ကို“ အခြား” ဘက်သို့လုပ်ဆောင်ပါ။
သူတို့အား Kotter ၏ရှစ်ဆင့်အောင်မြင်မှုသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ရုံမကသူသတိရစေမည့်လမ်းညွှန်မူသုံးရပ်ကိုပေးခဲ့သည်။
အဆင့်ရှစ်ချက်သည်နောက်ဆက်တွဲမဟုတ်ပါ။ ဤရွေ့ကားခြေလှမ်းများမော်ဒယ်, မဖြစ်စဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း - ပုံသဏ္,ာန်, မစနစ်တကျတိုးတက်မှုမရှိကြပေ။ သူတို့အားလုံးဖြစ်သင့်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်မည်သည့်အထူးအစီအစဉ်ဖြင့်မဆိုဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမိန့်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများမပျောက်ပါစေနှင့်။
ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ကွန်ယက်ကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းစစ်တပ်တစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်။ ကွန်ရက်ရှိလူများနေလိုသရွေ့လုပ်သားအင်အား၏ ၁၀% ခန့်သည်လုံလောက်လိမ့်မည်။ သီးသန့်မပါ ၀ င်ပါနှင့်၊ ပါ ၀ င်ရန်အပိတ်မခံပါနှင့်၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူ ၁၀၀% ကိုစုဆောင်းရန်လည်းမကြိုးစားပါနှင့်၊ သူတို့သည်ထိုတွင်ရှိနေခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုမမြင်နိုင်ပါ။ Kotter ပြောသကဲ့သို့ "စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများစစ်တပ်သည်ကြေးဝါများထံမှအမိန့်များကိုထုတ်လွှင့်သည့် ၀ တ်စုံများမဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်များသည်စွမ်းအင်၊ ကတိကဝတ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုများကိုယူဆောင်လာသည့်ပြောင်းလဲမှုခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။"
ဤရွေ့ကားသွက်လက်သောအုပ်စုသည်အဆင့်ဆင့်အတွင်းအလုပ်လုပ်သောလူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရမယ်, ဒါပေမယ့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်သွက်လက်သောကွန်ယက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ယက်သည်ဗဟိုတွင် ဦး ဆောင်နေသည့်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ပါ ၀ င်သည့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်နှင့်တူသည်။ ကွန်ယက်ကို“ လူဆိုးဂိုဏ်း” အဖြစ်ရှုမြင်။ မရပါ (သို့) အဆင့်ဆင့်က၎င်းကိုမလွှဲမရှောင်သာနှိပ်စက်လိမ့်မည်။
Agile သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်၊ အခွင့်အလမ်း၊ တုန့်ပြန်မှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ သိလိုစိတ်၊ ၎င်းသည်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘတ်ဂျက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ တပ်မှူးချခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်းသို့မဟုတ် Mad Men all-in မဟာဗျူဟာအတွက်တာ ၀ န်ယူခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ONE အဖွဲ့အစည်းတွင်စနစ်နှစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့, ခေတ်ရဲ့သွက်လက်သောကွန်ယက်တွင်ရှင်သန်သောအလုပ်သမားများသည်အသစ်တွေ့ရှိသောစွမ်းအင်ကိုအဆင့်ဆင့်သို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
ခေတ်မီသွက်လက်သောကွန်ယက်အသစ်သည်နုပျိုပျော့ပျောင်း။ ပိန်ပိန်သောဝန်ထမ်းထိတွေ့မှုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ခံစားမိနိုင်သည်။ ရပါတယ်! ဒါဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ။ ဒါဟာရုတ်တရက်ဒါမှမဟုတ်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ပါဘူး။ အသင်းတည်ဆောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအဆင့်အချို့လိုအပ်သည်။
ဆက်လုပ်ပါ။ လှေကားထစ်များကိုသေးငယ်အောင်ထားပါ။ အစမှအအောင်ပွဲများကိုဆက်သွယ်ပါ။ သွက်လက်သောကွန်ယက်ကိုလက်ရှိအဆင့်ဆင့်သို့ရောင်းချနေစဉ်သင့်ခြေထောက်အောက်တွင်ထားပါ။ အကယ်၍ သင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုလုပ်ပါကအဆင့်ဆင့်က၎င်းကိုမိုက်မဲသော၊ ကွဲပြားခြားနားသော၊ အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်း (သို့) အခြားအားဖြင့် ၉၀% မှ ၁၀% ကိုစွန့်ပစ်ခြင်းမှထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုမီစီးပွားရေးတန်ဖိုးသည်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။
ယနေ့ အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်း မနက်ဖြန်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ကူးကို ဦး တည်သွားစေတယ် ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အလုပ်ဟာတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုယ်တိုင်လိုပဲ၊ ၉၅% ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုသာဆိုရင်လူတိုင်းကလုပ်ကြလိမ့်မယ်။
Tags: ခေတ်ရဲ့သွက်လက်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အလေ့အကျင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းဗျူဟာကြီးထွားလာသစ်လွင်မှုJascha Kaykas-Wolffကွမ်းခြံကုန်းအရူးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်မှုစျေးကွက်ဗျူဟာရေတံခွန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမော်ဒယ်